အပျိုကြီး ဖြစ်နိုင်ချေများတယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြနေတဲ့အချက် (၅) ချက် - Focus Myanmar
August 15, 2019 By Myanamr Plus in အလှအပ Tags: အပျိုကြီး
အပျိုကြီးဖြစ်နိုင်ချေအများဆုံးကတော့ ဇီဇာကြောင်တဲ့သူတွေပါပဲ။ ဇီဇာကြောင်လွန်းတဲ့သူတွေဟာ အပျိုကြီးဖြစ်နိုင်ချေ အရမ်းကိုများပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်ရော ဇီဇာကြောင်လွန်းသူတစ်ယောက် ဖြစ်နေပြီလား?
ရည်းစား စကားလာပြောရင်တောင် အရှည်ကြီးတွေ၊ မလိုအပ်တာတွေကိုတွေးပြီး ငြင်းလွှတ်တာတဲ့သူတွေ၊ ရည်းစားတောင်မထားရသေးဘူး ရည်းစားထားရင်ဖြစ်လာမှာတွေကိုတွေးပူနေတတ်တဲ့သူတွေ၊ မလိုအပ်တာတွေ၊ အရေးမကြီးတာတွေကိုပါ တွေးတောနေတတ်တဲ့သူတွေဟာ တွေးလွန်းလို့နောက်ကောက်ကျပြီး ကျန်နေခဲ့တာနဲ့ အပျိုကြီးဖြစ်သွားကြတာပါ။
ဟိုလူလာလည်းမကြိုက်၊ ဒီလူလာလည်းမကြိုက်၊ ငါ့အကျင့်နဲ့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ငါကြိုက်တာ ဒီလိုပုံမျိုးမဟုတ်ဘူးနဲ့ အရမ်းရွေးလွန်းတဲ့သူတွေကလည်း အပျိုကြီးဖြစ်နိုင်ချေ အရမ်းများပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလောက် ဘယ်ယောင်္ကျားကိုမှ အထင်မကြီးတာမျိုးကလည်းအပျိုကြီးဖြစ်နိုင်ချေများတဲ့ သူတွေရဲ့ အကျင့်စရိုက်တစ်ခုပါပဲ။ ကိုယ့်ကိုချဉ်းကပ်လာတဲ့သူတစ်ယောက်ကို အထင်ကြီးတဲ့စိတ် တစ်စက်မှမရှိပဲ ကိုယ့်လောက်ဘယ်သူမှမတော်ဘူး၊ မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီး စိတ်ကြီးဝင်နေတဲ့သူတွေဟာလည်း အပျိုကြီုးဖြစ်နိုင်ချေများပါတယ်။
မဟုတ်တာတွေကအစ သ၀န်တိုနေတတ်တဲ့သူတွေဟာ သူတို့ဒီလို သ၀န်တို တတ်ပုံနဲ့ဆို ဘယ်ယောင်္ကျားနဲ့မှ အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ရည်းစားမထားတော့ပဲ နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲအပျိုကြီးဖြစ်သွားတတ်လို့ အရမ်းတွေးမနေပါနဲ့။ တစ်ခုခုဆိုတစ်စက်မှစိတ်မရှည်ပဲ အလကားနေစိတ်ကြီးပြီး စိတ်တိုတတ်တဲ့သူတွေကိုလည်း ကြာလာရင်သူများက စိတ်ကုန်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ အပျိုကြီးဖြစ်နိုင်တဲ့ အကျင့်စရိုက်ကြီးကြီးမားမား မဟုတ်ပေမယ့်လည်း ဒီလိုနဲ့ပဲ အပျိုကြီးဖြစ်သွားတဲ့သူတွေ ရှိပါတယ်။
ဒီလိုအချက်တွေအများကြီးနဲ့ တိုက်ဆိုင်နေရင်တော့ သင်ဟာအပျိုကြီးဖြစ်နိုင်ချေများတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါပဲ။
ရှေးလှနျးရငျ အပြိုကွီးဖွဈနိုငျတယျလို့ပွောကွတာ တကယျလညျးဖွဈနိုငျပါတယျ။ ကွိုကျမယျ့သူမရှိလို့မဟုတျပဲ တဈခုခုဆိုရငျ အရမျးစဉျးစားပွီး ရှေးလှနျးလို့ အခြိနျတှေ၊ နှဈတှအေကွာကွီး FA ဘဝနဲ့နနေရေပွီဆိုရငျတော့ အပြိုကွီးဖွဈဖို့ အလားအလာရှိနပေါပွီ။ ဒါကွောငျ့ အပြိုကွီးဖွဈနိုငျခမြေားတယျဆိုတာကို ဖျောပွနတေဲ့အခကျြ (၅) ခကျြကို မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
အပြိုကွီးဖွဈနိုငျခအြေမြားဆုံးကတော့ ဇီဇာကွောငျတဲ့သူတှပေါပဲ။ ဇီဇာကွောငျလှနျးတဲ့သူတှဟော အပြိုကွီးဖွဈနိုငျခြေ အရမျးကိုမြားပါတယျ။ သငျကိုယျတိုငျရော ဇီဇာကွောငျလှနျးသူတဈယောကျ ဖွဈနပွေီလား?
ရညျးစားစကားလာပွောရငျတောငျ အရှညျကွီးတှေ၊ မလိုအပျတာတှကေိုတှေးပွီး ငွငျးလှတျတာတဲ့သူတှေ၊ ရညျးစားတောငျမထားရသေးဘူး ရညျးစားထားရငျဖွဈလာမှာတှကေိုတှေးပူနတေတျတဲ့သူတှေ၊ မလိုအပျတာတှေ၊ အရေးမကွီးတာတှကေိုပါ တှေးတောနတေတျတဲ့သူတှဟော တှေးလှနျးလို့နောကျကောကျကပြွီး ကနျြနခေဲ့တာနဲ့ အပြိုကွီးဖွဈသှားကွတာပါ။
ဟိုလူလာလညျးမကွိုကျ၊ ဒီလူလာလညျးမကွိုကျ၊ ငါ့အကငျြ့နဲ့ဖွဈမှာမဟုတျဘူး။ ငါကွိုကျတာ ဒီလိုပုံမြိုးမဟုတျဘူးနဲ့ အရမျးရှေးလှနျးတဲ့သူတှကေလညျး အပြိုကွီးဖွဈနိုငျခြေ အရမျးမြားပါတယျ။
ကိုယျ့ကိုယျကိုလောကျ ဘယျယောင်ျကြားကိုမှ အထငျမကွီးတာမြိုးကလညျးအပြိုကွီးဖွဈနိုငျခမြေားတဲ့ သူတှရေဲ့ အကငျြ့စရိုကျတဈခုပါပဲ။ ကိုယျ့ကိုခဉျြးကပျလာတဲ့သူတဈယောကျကို အထငျကွီးတဲ့စိတျ တဈစကျမှမရှိပဲ ကိုယျ့လောကျဘယျသူမှမတျောဘူး၊ မလုပျနိုငျဘူးဆိုပွီး စိတျကွီးဝငျနတေဲ့သူတှဟောလညျး အပြိုကွီုးဖွဈနိုငျခမြေားပါတယျ။
မဟုတျတာတှကေအစ သဝနျတိုနတေတျတဲ့သူတှဟော သူတို့ဒီလိုသဝနျတိုတတျပုံနဲ့ဆို ဘယျယောင်ျကြားနဲ့မှ အဆငျပွမှောမဟုတျဘူးဆိုပွီး ရညျးစားမထားတော့ပဲ နတေတျကွပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ပဲအပြိုကွီးဖွဈသှားတတျလို့ အရမျးတှေးမနပေါနဲ့။ တဈခုခုဆိုတဈစကျမှစိတျမရှညျပဲ အလကားနစေိတျကွီးပွီး စိတျတိုတတျတဲ့သူတှကေိုလညျး ကွာလာရငျသူမြားက စိတျကုနျလာနိုငျပါတယျ။ ဒါကတော့ အပြိုကွီးဖွဈနိုငျတဲ့ အကငျြ့စရိုကျကွီးကွီးမားမား မဟုတျပမေယျ့လညျး ဒီလိုနဲ့ပဲ အပြိုကွီးဖွဈသှားတဲ့သူတှေ ရှိပါတယျ။